Lionel Messi oo dhaawac ku seegay tababarka iyo warar is qilaafsan oo ka soo baxaya xaaladdiisa – Gool FM
Haaruun June 4, 2020
(Barcelona) 04 Juun 2020. War aan u wanaagsanayn kooxda Barcelona ayay baahisay Catalunya Radio, kaasoo oo sheegaya in kabtanka kooxda ee Lionel Messi uu dhaawac muruqa ah ku seegay tababarka.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Leo Messi uu seegi karo kulanka ugu horreeya ee kooxdiisa Barcelona la leedahay Mallorca, marka dib looga soo laabto karaantiilka uu kubadda cagta geliyey Coronavirus.
Sida ay warinayso Idaacadda gobolka ee Catalunya Radio xiddiga reer Argentine ayaa dhaawac ku seegay tababarkii ay kooxdiisa Barcelona sameysay Arbacadii.
Waxa ay wararku intaa ku sii darayaan in Messi uu dhibaato ka dareemayo muruqa cajarka, sidoo kalena la saaray iskaanka MRI.
Waxaa la warinayaa in dhaawaca uusan ahayn mid daran, sidoo kalena uu seegi karo kaliya kulanka ay wajahayaan Mallorca.
Majaladaha Mundo Deportivo iyo Diario Sport ayaa daabacay inuusan Messi dhaawac ahayn, sidoo kalena tababarka uu uga baxay soo jeedinta macallinka jir dhiska kaasoo kabtanka Barca u diray dhanka Jiimka.
Wararka oo is qilaafsan awgeed iyo Barcelona oo aanan caddeyn sababta uu Messi ku seegay tababarka ayaa sabab u ah inaan la go’aamin karin xaaladda gooldhaliyaha ugu sarreeya Barca iyo Argentina.
Si kastaba ha ahaatee, Macallin Quique Setien ayaa fasax siiyay safkiisa maanta oo Khamiis ah, berri oo Jimce ahna ay ku soo laabtaan tababarka, sidaas darteed waxaa la filayaa in berri ay kala caddaato xaaladda Lionel Messi.